Williams Bay House - 1 Block ukuya Geneva Lake
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguBrian
Eli khaya liboniswe kwinqaku leMagazini yaseWisconsin elithi "Ezona Airbnb ziNtanda zipholileyo ziFumana eWisconsin". Sijonge ukubonelela ngokuphumla okuphumlayo kunye nenkonzo ebalaseleyo yeendwendwe zethu. I Williams Bay House ibekwe edolophini Williams Bay, Wisconsin, malunga 1 block ukusuka Geneva Lake. Hamba uye elunxwemeni, ibhodi yokuhambahamba, ukuqaliswa kwesikhephe, ukugcinwa kwendalo, ipaki, iindawo zokutyela kunye neevenkile. Sinikezela ngamaxesha okungena kunye nokuphuma okuguquguqukayo. Undwendwe lokuqala kufuneka lube ngaphezulu kweminyaka engama-25.
Kutshanje silungise ikhaya kumbindi weLake Geneva. Ligumbi eli-4 lokuhlambela eli-3 kwaye lilala i-15. Inokufunyanwa kuluhlu lwe-Airbnb 47991374.
Ikhaya lethu lesithathu ziingcango ezimbini ezantsi ukusuka kule ingasentla eDowntown Lake Geneva! Ligumbi lokulala eli-4 igumbi lokuhlambela elihle elilala i-12. Ngaphezulu kwe-65 yeenkwenkwezi ezintlanu zokuphononongwa !! Uluhlu lwe-Airbnb 31839350
Le ndlu yakhiwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu. Le ndlu yakhiwe ngefreyim yinkampani yasekuhlaleni yama-Amish eyabonelela yaza yafaka uphahla lwentsimbi. Iikhabhathi, i-trim, kunye neefestile zenziwe ziinkampani zaseWisconsin Amish, nazo. Omnye umsebenzi wenziwa ngabantu abarhweba basekuhlaleni. Yiza wonwabele eli khaya lakhiwe kutshanje eWilliams Bay, eWI. Eli likhaya elitsha lolwakhiwo elakhiwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, ubuchule bokuyila, kunye nobugcisa. Siyathemba ukuba uya kuyonwabela le propathi kangangoko sisenza!!
Amagqabantshintshi: Indawo egqibeleleyo yokukwazi ukuphumla kwaye ukonwabele le ndawo intle kwaye ukwazi ukonwabela imisebenzi kwimizuzu nje embalwa eWilliams Bay, edolophini eLake Geneva, eDelavan, naseFontana. Iyunithi inamagumbi okulala ama-4, iibhafu ezi-3 ezigcweleyo, ikhitshi eligcwele ngokupheleleyo elinezixhobo ezitsha, iiseti ezi-2 zewasha kunye nezomisi, igumbi losapho elitofotofo elineebhedi ezintsha kunye neTV entsha eyi-55" 4K, iWiFi ye-200 Mbps yasimahla, indawo yomlilo yegesi, itafile enkulu yegumbi lokutyela. , kunye nepatio enegrill yombane/ipatio itafile.Iyunithi inazo zonke iifenitshala ezintsha, yonke ifanitshala entsha, umgangatho omtsha, ikhaphethi entsha, nazo zonke izixhobo ezitsha ezingenastainless.
Igumbi lokulala elikhulu linebhedi yenkosi kunye nebhafu enesinki, ishawa, ibhentshi eyenziwe ngokwezifiso, kunye nebhafu yeJacuzzi. Igumbi lokulala eli-2 linebhedi enkulu enamagumbi amabini amakhulu. Igumbi lokulala eli-2 likufuphi negumbi lokuhlambela 2. Igumbi lokuhlambela 2 linesinki kunye nebhafu yejacuzzi eneshawa. Igumbi lokulala le-3 likwinqanaba elisezantsi kwaye linebhedi yokumkanikazi kunye negumbi elikhulu. Igumbi lokulala le-4 likwinqanaba elisezantsi kwaye lineebhedi ezi-2 ezigcweleyo ze-XL kunye negumbi elikhulu. Indawo eqhelekileyo ezantsi inebhedi yokutsala kunye ne-futon. I-twin rollaway iyafumaneka. Igumbi lokuhlambela le-3 likwinqanaba elisezantsi lilikhulu, libonisa ukuhamba ngeshawa kunye nesinki. Igumbi losapho eline-flat screen TV likumgangatho ophambili, kwaye indawo eqhelekileyo enomabonakude wescreen esicaba ikwinqanaba elisezantsi. Iyunithi UKULALA 12 kwaye inokwamkela abantu abasi-8 kwiibhedi ezahlukeneyo.
Ukupaka: Iimoto ezi-6 zinokupakishwa kwindlela yokungena kwiyunithi. Indawo yokupaka eyongezelelweyo iyafumaneka esitratweni. Undwendwe oluphambili kufuneka lusayine isivumelwano sokurenta ukuze luhlale ekhaya, isivumelwano sinokuthunyelwa ngaphambi kokubhukisha.
Ulwazi olongezelelweyo: Ikhaya linendawo yomlilo yegesi esetyenziselwa iindwendwe. Ngelishwa ngenxa yezizathu ze-inshorensi ikhaya alinayo indawo yokutshisa umlilo.
Indawo ibonelela ngeendawo zokutyela ezingama-40+, iivenkile ezikhethekileyo kunye neegalari, ii-spas ezinobunewunewu, iilwandle, iimarike zamafama, ukuhamba ngenqanawa echibini kunye ne-rustic kunye nokhenketho lwembali. Yonwabela iikhosi zegalufa ezaziwayo kunye nezinye izinto zokuzonwabisa ezibandakanya ukukhwela isikhephe, ukuloba, ukutyibiliza, ukutyibiliza emkhenkceni, ukutyibiliza, kunye nelinen ezip. Musa ukulibala yonke imithendeleko kunye neziganeko ezikhethekileyo!
I-Geneva National Golf Course ikumgama weemayile ezi-3, iqhayisa imingxunya engama-54 yegalufa yasentsomini, ivenkile yepro, indibano kunye nendawo yokusebenza, kunye neGrill Room yokutyela kunye neBar. I-Grill Room yindawo yokutyela eqhelekileyo ekwinqanaba elisezantsi leClubhouse. Ivulelekile kuluntu, abadlali begalufa okanye hayi, kwaye inika umbono omangalisayo wegalufa kunye nechibi, ukukhonza isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa ukususela ngo-Epreli ukuya ku-Oktobha.
4.95 · Izimvo eziyi-268
Indlu ikwidolophu yaseWilliams Bay, kwaye iindwendwe ziyakwazi ukuhamba kuyo yonke into, kubandakanywa nolwandle lwase-Geneva Lake, i-boardwalk, ukuqaliswa kwesikhephe, i-Kishwauketoe nature conservancy, i-shore path trail, iindawo zokutyela kunye neevenkile.
Andinxibelelani neendwendwe, kodwa ndiyafikeleleka ukuba kufuneka. Ndihlala imizuzu engama-45 kwaye ndihlala ndifumaneka ukuba kuvela ingxaki.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Williams Bay